Kutheni ukhetha uLightman
Ukukhanya kwePaneli ye-LED ekhanyayo
Ukukhanya kwePaneli yesakhelo se-LED
Ukukhanya kwePaneli ye-UL kunye ne-DLC
Ukukhanya kokukhanya kwePaneli ye-CCT
Ukukhanya kwePaneli ye-LED engenamanzi
I-RGB kunye neRGBW kunye neRGBWW yePaneli yePaneli
Ukukhanya kwePaneli ye-LED engenasiphelo kunye nesibhakabhaka
UkuSebenza ngokuKhanya kwePaneli ye-LED
Ukujikeleza kwePaneli yokuKhanya kwe-LED
Iphaneli ye-LED ephantsi
Umphezulu wokuKhanya kwePaneli ye-LED
Umphezulu wesikwere sePaneli ye-LED
Umbala ophindwe kabini wokuKhanya kwePaneli
Ukukhanya kwepaneli enkulu ejikelezileyo
Ukukhanya okumiselweyo kwe-LED Linear
Umphezulu Onyuswe Ukukhanya okuKhanya kwe-LED
Isibane se-UVC Sterilizer
Ukusonga i-UVC Sterilizer Wand
I-UVC yeSterilizer ephathwayo ngesandla
Imilebe ye-UVC Sterilizer Wand
Iibhalbhu ze-E27 UVC
Iselfowuni ye-UV Sterilizer Lamp
Ibhokisi ye-UVC yeSterilizer Box
I-infrared Induction UVC iSterilizer Lamp
Itoilet UVC Sterilizer Lamp
I-222NM kude-i-UVC yeLampicidal Lamp
IPIR woluvo 222NM Kude-UVC isibane seGermicidal
I-222NM Far-UVC yeGermicidal Tube
I-Doorknob UVC yeLampicidal Lamp
I-Doorknob ye-UVC yeLampicidal Lamp
IOfisi kunye neGumbi leNtlanganiso
Isikolo kunye neMfundo yaseDyunivesithi
Ukhathalelo lwezeMpilo kunye neGumbi elicocekileyo
Ivenkile kunye neVenkile kunye neSuphamakethi
Indawo yokuzivocavoca kunye neMidlalo
Indlela yangaphantsi kunye noLoliwe
Ukusetyenziswa kothotho lwamanzi
Ukusetyenziswa kochungechunge olungenasiphelo
RGB & RGBW & RGBWW Isicelo
Iphaneli yokuKhanya kwesicelo seSicelo seLightlight
Ubungakanani obukhulu bePaneli yokuKhanya
Ukukhanya kwesicelo sePaneli esiCwangcisiweyo
Ukunqongophala kwepaneli ye-LED yinkxalabo yabenzi beefowuni ezi-smart ze-Android
Wonke umntu ufuna umboniso we-OLED kwiselfowuni, akunjalo? Kulungile, mhlawumbi ayinguye wonke umntu, ngakumbi xa kuthelekiswa ne-AMOLED yesiqhelo, kodwa ngokuqinisekileyo sifuna, akukho bango, i-4-plus intshi ye-Super AMOLED kwifowuni elandelayo ye-Android. Ingxaki yile, azonelanga ukuba ujikeleze ngokwe-isuppl ...
"Isikhokelo sokukhanya kwepaneli yesikhokelo somatshini we-laser we-laser" sidlulise uvavanyo lwentsebenzo entsha
Kutshanje iBoe Laser isungule umkhombandlela omtsha wokukrola kwipleyiti ye-laser - "Iphaneli yokukhanya yesikhanyisi esikhanyayo kumatshini wokukrola we-laser". Umatshini wamkela itekhnoloji yokugxila eguqukayo kunye nenani leetekhnoloji ezintsha ukusombulula ingxaki yokuphazamiseka kwemiphetho kunye nelifu ...
IPanasonic yaseJapan isungula indawo yokuhlala yezibane zepaneli ngaphandle kokukhanya kwaye ikhuphe ukudinwa
Umbane waseJapan uMatsushita wakhupha ukukhanya kwepaneli ye-LED yokuhlala. Ukukhanya kwepaneli ye-LED kwamkela uyilo lwesitayile olunokuthintela ngokufanelekileyo ukukhanya kunye nokubonelela ngemiphumo emihle yokukhanyisa. Isibane se-LED yimveliso entsha edibanisa kugqame kunye nesikhokelo sokukhanya ...
Imikhombandlela emine okanye ubone ngokucacileyo injongo elandelayo yeenkampani zokukhanyisa i-LED
NgoJuni 2015, i-Guangzhou International Lighting Fair, umboniso omkhulu wokukhanyisa emhlabeni, yaphela. Itekhnoloji entsha kunye neendlela ezibonisiweyo kulo mboniso yaba yinto ekugxilwe kuyo kolu shishino. Ukusuka kuphuhliso lwezibane zemveli kwizibane ze-LED, iPhilips kunye nezinye izinto ...
Isibane se-LED, isibane se-xenon, isibane se-halogen, yeyiphi esebenzayo, uya kuyazi emva kokuyifunda
Isibane seHalogen, isibane se-xenon, isibane se-LED, nokuba yeyiphi na esebenzayo, uya kuyazi emva kokuyifunda. Xa uthenga imoto, abanye abantu banokungaluhoyi ukhetho lwezibane zemoto. Ngapha koko, izibane zeemoto zilingana namehlo emoto kwaye zinokucaca ebumnyameni. Ukujonga kwindlela engaphambili, iimoto eziqhelekileyo zine ...
I-Lightman ekhokele ukukhanya kweepaneli
Ukukhuthaza amandla kuqoqosho lwekhabhoni esezantsi namhlanje, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, ukuphucula ukusebenza ngokukuko kube yimvumelwano kwezentlalo. Kule meko, i-lightman icwangcise "ukukhupha isaqhwithi" kwicandelo lokukhanyisa ngaphakathi, kwaye yasungula ukukhanya kwepaneli entsha ye-LED. Th ...
Yintoni ebangele ukuba ukukhanya okukhokelwayo kube mnyama?
Ubumnyama ukukhanya kwe-LED kukuba, kuqhelekile ngakumbi. Ukushwankathela izizathu zokuba mnyama kwezibane ze-LED akukho ngaphezu kwala manqaku mathathu alandelayo. Umonakalo kumqhubi weelayiti zezibane ze-LED ziyacelwa ukuba zisebenze kwi-voltage esezantsi ye-DC (ngaphantsi kwe-20V), kodwa umbane wethu oqhelekileyo wokubonelela ngombane yi-AC high voltage (AC 220V). Ukuya ...
Kutheni umbala wobushushu be-LED uthandwa kangaka kwezi ntsuku?
ngomphathi ku 19-11-14
Kuyaziwa ukuba ukuthatha imifanekiso kuluhlu olusondeleyo xa ukukhanya kumnyama ngakumbi, nokuba ukukhanya okuncinci kangakanani kunye nokukhanya okumnyama kufota, akukho flash inokudutyulwa, kubandakanya i-SLR. Ke kwifowuni, ivelise ukusetyenziswa kwesibane se-LED. Nangona kunjalo, ngenxa yomda ...
Zeziphi izinto ezintlanu eziphambili ezichaphazela ixesha lokuphila kwezibane ze-LED?
Ukuba usebenzisa umthombo okhanyayo ixesha elide, uya kufumana izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye unciphise umkhondo wekhabhoni. Kuxhomekeke kuyilo lwenkqubo, ukunciphisa ukukhanya okukhanyayo yinkqubo eqhelekileyo, kodwa kunokungahoywa. Xa ukukhanya okukhanyayo kuncitshisiwe kancinci, inkqubo iya kuhlala ikwimeko entle ...
Iitekhnoloji ezintathu eziphambili zezibane zepaneli ekhokelwayo
ngomphathi ku 19-11-13
Ukusebenza okubonakalayo (ukuhanjiswa kokukhanya): Ukusebenza kokukhanya kwezibane zepaneli ze-LED ikakhulu kubandakanya iimfuno zomsebenzi ngokubhekisele kukukhanya, ukubonwa kunye ne-chromaticity. Ngokomgangatho wamashishini amva nje "weNdlela yokuVavanya i-Semiconductor ye-Semiconductor", kukho ipea ekhanyayo ...
Inkqubo yokukhanya kwemveliso yokukhanya kwepaneli yokuma komgangatho
Njengohlobo lokukhanyisa iimveliso ze-elektroniki, izibane zepaneli ze-LED zifuna iindlela zolawulo olungqongqo nolungqongqo kunye namaziko okuqinisekisa ukuthembeka komgangatho, kubandakanya ukwenziwa kweenzuzo kunye nezinto ezingalunganga, uzinzo lokusetyenziswa, kunye nesiqinisekiso sobomi. Ngokubanzi, ukusuka kwi-r ...
Izinto zokukhanya kwepaneli ye-LED kunye neenkcukacha zobugcisa
Ngokukhulisa ishishini lokukhanyisa i-LED, ukukhanya kwepaneli ye-LED evela kwilightlight ye-LED, inokukhanya okufanayo, akukho litha, kunye nolwakhiwo olugqwesileyo, oluthandwayo ngabantu abaninzi kwaye luyindlela entsha yokukhanya kwangaphakathi kwefashoni. Izinto eziphambili zepaneli ukukhanya kwe-LED 1. Iphaneli ...
Iimpawu zorhwebo lwezibane zangoku ze-LED kunye nendawo yophuhliso
ngomphathi ku 19-11-12
Ukuphuhliswa kwezibane zala maxesha kule minyaka mibini idlulileyo kunokuchazwa njengokuzikhukhumalisa kwaye kunganqandeki. Abavelisi abaninzi kunye nabarhwebi bathathe ithuba lokuthatha ithuba kwaye bahlasela imeko, ethe yakhawulezisa uphuhliso lweendidi zezibane zala maxesha. Umbono ka-Lightman ndi ...
Umqhubi we-LED unamandla
Njengengxenye ephambili yezibane ze-LED, ukunikezelwa kwamandla kwe-LED kufana nentliziyo ye-LED. Umgangatho wamandla ombane we-LED ubeka ngokuthe ngqo umgangatho wezibane ze-LED. Okokuqala, kuyilo lolwakhiwo, umbane wangaphandle wokuqhuba umbane we-LED kufuneka ube nokusebenza okungqongqo kwamanzi; ngapha koko, ayinakho withsta ...
Umqhubi we-LED unezixazululo ezintathu eziphambili zobugcisa
ngomphathi ku 19-11-11
1. I-RC Buck: imbonakalo elula, isixhobo esincinci, esinexabiso eliphantsi, asihlali rhoqo. Isetyenziswe ikakhulu i-3W nangaphantsi kokumiselwa kwesibane se-LED, kwaye kukho ingozi yokuvuza okubangelwa kukuwohloka kwebhodi yesibane, ke iqokobhe lolwakhiwo lomzimba wesibane kufuneka ligqunywe; 2. Ukunikezelwa kwamandla okungafaniyo: iindleko i ...
Ukwakhiwa kweShishini loShishino, iPaki ye-3 ye-Industrial, iSithili sase-Guangming, iSixeko saseShenzhen, iPhondo lase-Guangdong, i-518106, i-PRChina